'जिम्बाले जित्दा विनय हार्छ, अनितले जित्छ, कसरी भन्नुहोस् त?' - खबरम्यागजिन
Homeखबर‘जिम्बाले जित्दा विनय हार्छ, अनितले जित्छ, कसरी भन्नुहोस् त?’
‘जिम्बाले जित्दा विनय हार्छ, अनितले जित्छ, कसरी भन्नुहोस् त?’
‘आफ्नै जातिको हुन नसक्ने विनय तामाङ अर्काको कसरी हुन्छ? ममतासित पोलिटिकल लभ अब टुट्ने बेला आयो,’ उनले थपे, ‘राजु विष्ट मामुली मानिस होइनन्। अब भारतको गोर्खाहरूको मन्त्री हुन्। नर्थइष्ट र गोर्खाहरूको मन्त्री। दिल्लीमा मन्त्री भएपछि गोर्खाहरूको सबै समस्याको एकएक सामाधान हुँदै जानेछ।’
सुकेमा चुनाउप्रचार गर्दै जनसभा गर्न पुगेका भाजपा उम्मेदवार निरज जिम्बाले अचम्मको कुरा गरे। उनले भने, ‘निरज जिम्बाले जित्दा विनय हार्छ। विनयको टाँयटाँयफिस्स हुन्छ। तर अनितको हार हुँदैन। कसरी भन्नुहोस् त?’
जिम्बाको कटाक्ष वास्तवमा के हो भने अनित थापाले विनय तामाङलाई झुक्याएर जिटिए हातमा लिइसकेका छन्, अनितको कुटनीतिबारे विनय तामाङलाई सुइँकोसमेत थाहा छैन। जिम्बाअनुसार अनितले विनयलाई बोरामा सुताइसकेका छन्।
‘विनय तामाङले जिटिएबाट पनि हात धुन्छन्, विधायक पनि बन्दैनन्। जिटिए विओए अध्यक्ष अनित थापाहरूले विनयलाई पार्टीको अध्यक्ष पदबाटै राजिनामा दिन लगाउनेछन्,’ जिम्बाले भने। विनयले सर्वस्व गुमाउने तर अनितले भने जिटिए हत्याउने हुँदा नै निरज जिम्बाले जित्दा विनयको हार र अनितको जित हुने कुटनैतिक भाषण जिम्बाले राखेका हुन्।
जिम्बाले अचम्म माने, पार्टीका अध्यक्ष विनय तामाङ चाँही विधानसभा उपचुनाउ लडिरहेका छन्। साधारण सदस्य अमरसिंह राई चाँही लोकसभामा। विनय तामाङलाई ममताको काखमा लुक्न हतारो रहेकोले नै यस्तो अचम्भको घटना देख्न परेको जिम्बाको किटान हो।
‘जातिलाई बेच्ने विनय तामाङ कठपुतली हुन्, ममताले नचाउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यही जाति बेच्नेबाट जनतालाई जोगाउन विमल गुरुङले मलाई जनताको सुरक्षा कवज बनाएका हुन्। यसैको लागि भाजपाले टिकट दिएको हो।’
उनले विनय तामाङहरूले कहिले दूध, कहिले मही, कहिले दही मागिरहेको तर आफूहरूले भने गाई नै मागेको सुनाए। भाजपाको मेनिफेस्टो उनले उदाहरणको लागि देखाए।
‘आफ्नै जातिको हुन नसक्ने विनय तामाङ अर्काको कसरी हुन्छ? ममतासित पोलिटिकल लभ अब टुट्ने बेला आयो,’ उनले थपे, ‘राजु विष्ट मामुली मानिस होइनन्। अब भारतको गोर्खाहरूको मन्त्री हुन्। नर्थइष्ट र गोर्खाहरूको मन्त्री। दिल्लीमा मन्त्री भएपछि गोर्खाहरूको सबै समस्याको एकएक सामाधान हुँदै जानेछ।’ यसैले नै गोजमुमो-गोरामुमोले भाजपासित गठबन्धन गरेको पनि उनले सुनाए।
‘हाम्रो राजनीति बाटोको होइन माटोको हो,’ जिम्बाले भने, ‘उपचुनाउमा भोट चोट्टालाई होइन मोटालाई।’
यता राजु विष्टले जिटिएको फूलफर्म केलाए। ‘जि’ भनेको गुरुङ (विमल) ‘टि’ भनेको तामाङ (विनय) ‘ए’ भनेको अनित। मलाई ‘जि’ दिनु, अरू लैजानु। गोर्खा बचाउने ‘जि’ नै हुन्,’ विष्टले भने, ‘आन्दोलनको बेला बम कहाँबाट आयो? 11 जना कसरी मरे। बन्दुक कताबाट आयो? एनआईए होस् कि केन्द्रको एजेन्सीले होस् म जाँच गराएरै छोड्छु। कसले बम, बन्दुक ल्यायो, आन्दोलनलाई कसले हाइज्याक गऱ्यो र बङ्गालसित मिलेर कसले पैसा थाप्यो, त्यसको दूधको दूध र पानीको पानी हुनेछ।’
ममता व्यानर्जीले विकास दिने भनिरहेको जनाउँदै व्यानर्जीलाई उनले दार्जीलिङको अस्पतालको टोइलेटमा एक दिन उभिदिने आग्रह गरे। 10 वर्ष शासनमा हुँदा नदिएको पर्जापट्टा ममताले नदिने किटान गर्दै भने, ‘बनबस्ती होस्, डिआई फन्ड होस् वा चियाबारी, कुलैनबारी होस्, म संसदमा बील बनाएर सबैलाई पर्जापट्टा दिलाउँछु। जनताको सपना पूरा हुनेछ। भाजपाले धेरै विकास गर्नेछ।’
‘गोर्खा’ नाम भएका दलहरूले गोर्खाल्याण्ड छोडे, जापले मात्र गोर्खाल्याण्डको मुद्दा उठाइरहेको छ’